ညစ်ညမ်းသူများအတွက်အိပ်စက်ခြင်းအကြံပြုချက်များ - Your Brain On Porn
RebootNation.org တွင်အိပ်မပျော်ခြင်းအကြောင်း Gabe Deem ၏ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
အိပ်မပျော်ခြင်းသည်ဘုံဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အချို့၏အကြံပြုချက်များမှာ -
ညတိုင်းဂီတကိုအိပ်ပျော်သွားတယ် (အိပ်ချိန် timer နဲ့အတူ) ။ ဂီတကကျွန်တော့်စိတ်ကိုရှင်းလင်းစေတယ် ငါနိုး။ မပျော်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဂီတကိုဖွင့်သည်၊ သို့မဟုတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်သည်။ ငါတကယ်အိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်စာဖတ်ခြင်းဟာငါ့အတွက်တကယ်ကောင်းပါတယ်။ တစ်ညအိပ်အိပ်မောကျမှုဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးမဟုတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောဖို့လည်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတကယ်ကူညီပါတယ်။
လုံလောကျအိပျပျြောရတဲ့ PMO ရှောင်ရှားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းအစီရင်ခံစာ reboot သူကိုယောက်ျားတွေ။ ဒီစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းပင်ပန်းနွမ်းနယ် relapse များအတွက်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြင် ဒီစာမျက်နှာကိုအောက်တွင်သုတေသန.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အိပ်မပျော်ဘုံဆုတ်ခွာလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤစိန်ခေါ်မှုကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အချို့၏အကြံပြုချက်များကိုဒီမှာကြည့်ပါ။
သင်၏ကိရိယာများတွင်“ f.lux”,“ twighlight”,“ redshift” ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုထည့်ပါ။ နေဝင်ချိန်ကိုတုပရန်သင့်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အနီရောင်စစ်ထုတ်ကိရိယာတစ်ခုထည့်ထားသည်။ ငါအိပ်မပျော်တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီလို့ထင်ပြီးညအချိန်မှာနည်းပညာကနေဝေးသွားပြီးတစ်ပတ်အကြာမှာပျောက်သွားတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆန့်ထုတ်ခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့စာဖတ်ခြင်းကကျွန်မကိုအိပ်ပျော်စေတယ်။
ကျိန်းသေတစ်ဦးစာဖတ်ခြင်းဆီမီးခွက်အရ။ ညာဘက်ဘေးနားရှိအိပ်ရာကရှိသည်။ သင့်ရဲ့စာအုပ်အပေါ်ထွန်းလင်းအခန်းထဲမှာအပေါ်တဦးတည်းအလင်းကိုသင်အိပ်ချင် vehehehry စေမည့်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခု။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအရက်ဖြင့်မထည့်ပါနှင့်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါကသင့်ကိုအိပ်ပျော်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်စောလွန်းရင်နိုးလာလိမ့်မယ်၊ (စွဲလမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေသောအခြားအရာတစ်ခုနှင့်အစားထိုးခြင်းသည်ကောင်းသည့်အကြံလည်းမဟုတ်ပါ။ )
ငါညအချိန်တွင်နှောင်းပိုင်းတွင်အပြေးတော့တာပဲ။ ငါပြန်ရသည့်အခါငါရေချိုးခန်းယူနှင့်အိတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဟာချက်ချင်းအိပ်ငါ့ကိုတတ်၏။
အိပ်မပျော်ဘို့, အနီရောင်နေ့စွဲဟင်းချိုနှင့် miso ဟင်းချိုကိုသောက်လော့။ (ဒါဟာငါ့ကိုအိပ်ခွင့်ပြု) http://www.homemade-chinese-soups.com/red-date-soup.html ဒါမှမဟုတ်ကြိုးစားကြည့် miso ဟင်းချို miso ငါးပိနှင့်အတူအလွယ်တကူ လုပ်. ရနိုင်ပါကသင့်ရဲ့အာရှကုန်စုံစတိုးဆိုင်အများစုတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ရေပူထဲမှာ miso ငါးပိပျော်နှင့် wa la, သင်ကဲ့သို့သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးရောမွှေ! အားလုံးပြုသောအမှု, (ငါ့အပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက် shrio miso, Chia မျိုးစေ့များ, အန်စာတုံး scallions နှင့် tofu ဖြစ်ပါသည်။ )
ငါ PMO သို့တော်တော်လေးလေးလံခဲ့, ငါရပ်တန့်သောအခါ, ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အိပ်ပျော်ခြင်းအရည်အသွေးကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါ့အဘို့တော်တော်လေးကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ ငါကထဲကကိုချိုးဖျက်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်အရာတစ်ခုမှာအိပ်ရာ၌ငါ့လက်တော့ / ဖတျရှုသုံးစွဲဖို့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်မမီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်ကကို set up နဲ့ကျွန်မပင်ပန်းတဲ့အခါမှသာအိပ်ရာမှာအိပ်လိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ့်အခက်အခဲပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသည်အထိအိပ်ပျော်အားလုံးငါ့အသက်ကိုကျသွားခဲ့ကြသောသင်ပြောပြချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကလုံးဝမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ငါအိပ်ပျော်ကျသွားရှေ့မှာ atleast2နာရီကိုတင်သောခံရ wont သိသောကြောင့်ယခုငါတကယ်အိပ်ရာကိုသွားချင်တယ်။ စောစောထနိုးဖို့ရှိခြင်း, တော့ဘူးစောစောထနိုးဖို့ရှိခြင်း, နေ့တစ်လျှောက်လုံးဒီတော့ပင်ပန်းခံစားနိုင်အောင်အများကြီးခံရဖို့အသုံးပြုမျှပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနှောင့်နှေးကလစ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမရှိတော့ငါအိပ်လို့ကိုသွားသည့်အခါ, ငါပဲရှိအိပ်အတွေးများကိုငါ့ဦးခေါင်းချွတ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ကျနော့်ကိုနီးပါးချက်ချင်းအိပ်ပျော်ငါ့ဦးခေါင်းအတွက်ကစား။ အစောပိုင်းကဒီ 41 နေ့ကအစီရင်ခံစာ Posted https://www.reddit.com/r/NoFap/comments/4yb6rd/crazy_difference_all_the_benefits_ive_seen_so_far/ အရင်ကဲ့သို့အဖြစ်မဆိုးပေမယ့်နှင့်ဤအချိန်တွင်ငါနေဆဲ, အိပ်ပျော်နေသောအချို့အခက်အခဲများရှိခြင်းခဲ့သည်။ အနာဂတ်မှာဒီထဲကထက်ပိုဆောင်တတ်၏အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်း cant, ငါသည်ဤအတူတိုင်းလက်မအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါခဲ့ရပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာ aswell အခြားအရာဖွံ့ဖြိုးဆဲ, သူတို့ကဖြစ်စေအခမဲ့ရောက်လာပြီ havent ကောင်လေးယခုအချိန်အထိဘဝမှာတချို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အပြောင်းအလဲမြင်ပါသော်လည်း ဟေးဘဝအားလုံး Sunshine နှင့် Rainbow ဖြစ်လို့ယူဆတယ် aint ။
ငါနိုးထနှင့်ငါ၏စိတ်ကိုအတှေးအပြည့်အဝဖြစ်လျှင်, ငါစာရွက်တစ်ရွက်ဖမ်းပြီးသူတို့အားလုံးကိုချရေးပါ။ ငါတစ်နေရာရာမှာအကြံအစည်ထားကိုးစားသောကွောငျ့ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးပြီးတော့ပြေစေပြီး။
ငါ PMO နှင့် MO ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ရုန်းကန်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုလုံးမှာအိပ်ပျော်ခြင်းမတိုင်မီအမြဲတမ်းပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အိုမင်းဖို့ပိုပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်။ ပိုကြာကြာကြာတာ၊ ငါ့ကိုနောက်ကျအောင်လုပ်တာတွေဖြစ်တယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့နဲ့မထွက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာစက်ဘီးစီးတာကိုကျွန်တော်မအိပ်ခဲ့ဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်ကကြမ်းတမ်းနေတယ်၊ ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီမှာငါစုံတွဲတစ်တွဲညညအိပ်ပျော်တော့မလားမစဉ်းစားဘဲအိပ်ပျော်သွားတယ်။
fapping ဟာငါအိပ်လို့နိုင်တယ်လို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းလို့တွေးပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၀ ရက်လောက်ငါအိပ်မောကျနေပြီလို့ထင်လို့ပါ။ ငါ ထပ်မံ၍ အခက်အခဲရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပေမယ့်ခေါင်းအုံးကိုထိလိုက်တဲ့အခါအိပ်မောကျသွားပြီး ၂-၃ ညသွားနိူင်တယ်။
စိန့် Johns တစ်သွားလာရင်း wort ပေးပါ။ ဒါဟာသက်သာစေသောဆေး / ငိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ငါလက်ဖက်ရည်ထဲမှာကိုသောက်လော့။
ငါတဖြည်းဖြည်းနှေးနှေးရှူရှိုက်လေ့ - နှာခေါင်းမှတဆင့်၊ ပါးစပ်ထဲမှ ထွက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဟန်ချက်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေသည်။ မကောင်းဘူးဆိုရင်ငါတမင်တကာလုပ်လိမ့်မယ် kegels - ညသန်းခေါင်ယံ၌ပင်။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့သူတို့ကတောင့်တမှု / ဆုတ်ခွာခြင်းကိုဖြေလျှော့ပေးပြီးသင်ခေါ်ချင်သမျှကိုစွမ်းအင်ပြန်လည်ခွဲဝေပေးသည်။ ကြွက်သားများသည်ခီဂျယ်လ်နှင့်အနည်းငယ်ခဏတာအာရုံစိုက်ခံရပြီး“ ပြန်အိပ်” နိုင်သည်။
Binaureal Beats: သူတို့ငါ့ကိုပြန်ဖွင့်၏ကနဦးအိပ်ရေးပျက်အဆင့်စဉ်အတွင်းအိပ်ကူညီပေးခဲ့သည်
Ive အတိတ်တွင်သန်းခေါင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဘလောက်ထားတော်မူ၏။ တဖန်ငါကြောင့်လုပ်နေတာ start ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Ive အမှန်တကယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် hemi-ထပ်တူပြုခြင်းစီးရီးကိုအသုံးပြု techniques- ဒါ့အပြင်လေ့ကျင့်ခန်း helpsMelatonincold / မှောင်မိုက် roombreathing / တရားထိုင်။ ၎င်း၏ OBE / Astral ခရီးသွားဘို့လို့ယူဆတယ်, ဒါပေမယ့်ငါနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်မှအပေါ်ခရီးသွားလာရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်
—-> ပုံမှန်အိပ်ရာထ။ အိပ်ရာဝင်ရန်။
—-> ထို့အပြင်တစ်နေ့တာတွင်အလွန်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ပါ - ပျင်းရိခြင်းမရှိ
တခြားအရာအားလုံးထက်ပျက်ကွက်လျှင်, ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေကိုစတင်ပါ။ ငါ့အဘို့, သော့ကိုအခြားအရာတစ်ခုခုအပေါ်မှာငါ့စိတ်ထဲများ၏အာရုံစူးစိုက်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မယ်လတိုနင်သည်အိပ်စက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသောသဘာဝဖြစ်ပြီးစွဲလမ်းမှုမရှိပါ။ သင့်ရဲ့လျှာအောက်မှာပျော်ဝင်နေတဲ့ 'sublingual' type ကိုရရှိဖို့သေချာပါစေ။ တခါတရံသူတို့ကို 'lozenges' လို့ခေါ်တယ်။ အရမ်းအချိန်ဇုန်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခါအသုံးဝင်သည်။ နောက်လူတစ်ယောက်ကမူ“ ငါကွဲပြားခြားနားသောဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာအကူအညီများကိုကြိုးစားသည် - melatonin နှင့် 5-HTP ဖြည့်စွက်ချက်များ။ သူတို့ကိုငါအကြံမပေးပါဘူး ၎င်းတို့နှင့်၎င်းတို့၏ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက်သုတေသနပြုချက်များစွာမရှိပါ။ ထို့အပြင် melatonin သည် (နေရာတိုင်းတွင်လွတ်လပ်စွာမရရှိနိုင်ပါ) ဖြစ်သည်။ 5-HTP သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အိပ်စက်ခြင်းအဖြစ်ယခင်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ serotonin level အပေါ်သီအိုရီအရသက်ရောက်မှုရှိတာကိုငါခံစားခဲ့ရပြီးနည်းနည်းလေးအသုံးမပြုခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ပြန်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ melatonin နဲ့ 5-htp နဲ့ငါ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုကငါ့ရဲ့ခံစားချက်အဆင့်ကိုကျဆင်းသွားတယ်။ “
မယ်လတိုနင်သည်သင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ကူညီသည်၊ သို့သော်သင်လိုအပ်လျှင်သာကူညီသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းအချိန်ဇယားကိုမချန်မထားဘဲသို့မဟုတ်ညနေခင်းအများစုအတွက်တောက်ပသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိခဲ့လျှင် ဦး နှောက်သည်သူ့ဟာသူလုံလောက်စွာထုတ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အဆင့်နိမ့်နိမ့်ကျ။ သင်ယူလျှင်၊ ၎င်းသည် ထပ်မံ၍ နောက်ထပ်တစ်ခုထွက်ရန်မကူညီနိုင်ပါ။ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ရှေ့တွင်နောက်ကျချိန်၌ငါ ၃ မီလီဂရမ်သောက်သည်။
ငါ“ အိပ်မပျော်ခြင်း” ဟုခေါ်သည့် homeopathic ဆေးတစ်လက်နှင့်ငါကံကောင်းပါစေ။
ငါနိုးထပြီးခဏကြာသည်။ ဒါပဲ။ ငါအိပ်ပျော်ပြန်လျှင်, ကောင်းပါပြီ။ ငါမလုပ်ရင်ကောင်းတယ် ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်ခြင်းကိုချစ်။ ပြီးတော့ငါသိပ်အိပ်မပျော်တာကိုစိတ်ထဲမထားဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လိုအပ်ပါကတစ်နေ့တာအတွင်းအမြဲတမ်းအိပ်နေနိုင်သည်။ ပြန်လည်အိပ်ပျော်သွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဖိစီးမှုလုံးဝမရှိခြင်းနှင့်စာဖတ်ခြင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အစားထိုးအပြုအမူဖြစ်သည်။
အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်လက်ပ်တော့ပ်သို့မဟုတ်ဖုန်းကိုမသုံးပါနှင့် (တောက်ပသောအလင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ 'နိုးနေ' သောဓာတုပစ္စည်းများတိုးပွားစေသည်) ။ အိပ်ရာမဝင်ခင်တစ်ခုခုဖတ်ပါ။ သင်နိုးသောအခါထိုအရာကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါနှင့်။ အချိန်ကိုသာသုံးပါ။ ငါဤသို့ပြုစတင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အဆုံး၌မျှသာဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုမှအရည်က melatonin အကြံပြုကြောင့်အကြီးအအလုပ်လုပ်တယ်! ငါကိုအသုံး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ် ငါအကြောင်းကို $ 10 များအတွက် GNC မှာဝယ်ခဲ့တယ်။ 2oz ပုလင်းငယ်လေးပါ။ 30 စားသုံးခြင်းနှင့် Citrus အနံ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဝန်ဆောင်မှု 3.5 MG (2 dropper) ရှိပါတယ်။ ဒီဆေးကိုသောက်ပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်ခန့်အကြာမှာကျွန်တော်တကယ်အိပ်ချင်နေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တော့နာရီအတော်များများအထိနေလို့ရပါတယ်။ ဤအရာသည်သင့်အားကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းသံသရာသို့ပြန်ရောက်စေလိမ့်မည်။
အကြှနျုပျ၏ချဉ်းကပ်ခဲ့သည် တသမတ်တည်းလေ့ကျင့်ခန်းနေရောင်ခြည်ဖြစ်နိုင်သမျှ (သဘာဝ melatonin) နှင့်“ အိပ်ယာကိုသာအိပ်စက်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအတွက်သာအသုံးပြုပါ” ဟူသောအတိုင်းလိုက်နာခြင်းဖြင့်တစ်ကိုယ်ရေဘဝအတွက်“ သင်၏အိပ်စက်ခြင်းကိုသာအိပ်စက်ခြင်းအတွက်သာအသုံးပြုခြင်း” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အနည်းငယ်သာဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်းအကူအညီဖြစ်စေသည် ဒီဗီဒီယို တကယ်အရာရာအပေါ်မှာငါ့ရှုထောင့်ကကူညီပေးခဲ့: ၎င်း၏တစ်ဦးလူတိုင်းအတွက်စောင့်ကြည့်ရပေမည်။ ပြန်လည်: အပြုသဘောစဉ်းစားတွေးခေါ်။ ကျိန်းသေငါ၏အစိတ်ဓါတ်များနှင့်အလှည့်၌, အိပ်ပျော်ခြင်းအရည်အသွေးကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
အလင်းရောင်မရှိတော့ဘူး၊ အိပ်ရာထဲမှာလဲနေပြီ။ အိပ်စက်အနားယူပါ။ မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုပါ။ ဖြစ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်ကိုပြုလုပ်ပါ။ သင့်စိတ်ထဲကျယ်ကျယ်လောင်လောင်တွေးတောပါ၊ သင်ဆိုလိုသည့်အတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားပါ - အချက်တစ်ခုစီကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဥပမာ:ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာသောခန္ဓာကိုယ်အတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသောအိမ်တွင်နေထိုင်ရန်၊ စားရန်အတွက်အစားအစာရရှိရန်နှင့်သောက်ရေအတွက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စစ်မက်ကင်းဝေးတဲ့ကမ္ဘာ၏လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းမြောက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များ (သူတို့ကိုပုံဖော်ကြည့်ပါ) နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူမျှဝေသမျှ၊ ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးသည်၊ လမ်းညွှန်သည်၊ ရယ်မောစေပြီး၊ ချက်ပြုတ်သည်၊ ငါပညာရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလေ့လာပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည့်မည်သည့်ဝါသနာပါသည့်အတွက်မဆိုကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ရေပူရေခဲပိုက်များထဲထည့်သွင်းသောရေပိုက်သမားများအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်လာသည့်ဒိုင်နိုဆောများအားကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်ရှိသောရေကိုအပူပေးသည်။နှင့်ပေါ် ... အပေါ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် သီလစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထု စိတ်ကိုပိုပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေတဲ့အရာအားလုံးအဖြစ်။ သီလနှင့်ပြည့်စုံသောစိတ်ကိုအာရုံစိုက်ရန်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တတ်နိုင်သမျှကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သည့်အတွေးများကိုဆက်ထားပါ။ ဖန်တီးမှုရှိပါ။ ဒါဟာထူးခြားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တကယ်တမ်းမှာကျေးဇူးတင်စရာလမ်းမရှိဘူး။ ယခုငါစားသောအစားအစာများကိုကြီးထွားစေသောလယ်သမားများ၊ လမ်းများဆောက်လုပ်သောအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အလုပ်သမားများနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာမနက်စာစားခဲ့သောအမေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ..စသည်တို့ကို
Reddit အပေါ်ချည် ကို restart စဉ်အတွင်းအိပ်ရတဲ့
အထူးသဖြင့် Nofap ၏ပထမအပတ်များအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ညအချိန်တွင်အိပ်ပျော်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအိပ်ပျော်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုန်ခန်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် fapping အသုံးပြုခဲ့သည်။ Nofap နဲ့ပြနာကငါ့ရဲ့အကျင့်ဟောင်းတွေကိုမမှီတော့ဘူးဆိုတာပဲ။
ငါ့အဖြေ? အအေးမိရေချိုးခြင်း။ ငါအိပ်ရာမဝင်ခင်ချက်ချင်းပဲလုပ်တယ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်အပူချိန်ကိုအေးစေပြီးကြွက်သားများကိုသက်သာစေသည်။ အဆိုပါတိုက်တွန်းအိပ်ပျော်ဖို့အလုံအလောက်ရှည်လျားသွားပါ။ ငါညတိုင်းမသုံးပေမယ့်ငါညမှာအိပ်ပျော်ဖို့အခက်တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ တချို့ညတွေငါတောင်နှစ်ခါလုပ်ရတယ်။
ဒီခရီးစဉ်၏ပထမရက်သတ္တပတ်များကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားမသိသေးသောအချိန်၊ မနက် ၄ နာရီတွင်ရေခဲရေထိမိသည့်အခါသူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စွာစိုက်ကြည့်သည်။ c ငါရူးသွားသလားဟုတွေးသည်။
ဒါကြောင့်ဒီရေအေးကိုသောက်ပါ။ သင်၏စိတ်ကိုဖြတ်ပြီးစီးသွားသောသူတို့အားအစပျိုးခြင်း၊ တွန်းအားများနှင့်ပုံရိပ်များခံစားနေရသောမျက်နှာကျက်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ထိုနေရာတွင်မနေပါနှင့်! ထားရှိခြင်းသည်ပြဿနာများညမှာအိပ်ပျော်ကျသွား? အအေးမိရေချိုးခန်းကိုယူသွားပါ!
ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ရစ်သမ်ညှိဖို့လုပျနိုငျအနည်းငယ်အရာဖြစ်ကြ၏:
သငျသညျအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ 1) လိမ္မော်ရောင်-tinted ဆောက်လုပ်ရေး Wear တစ်နာရီ glasses ။ ဤရွေ့ကားသင့်ခန္ဓာကိုယ်က melatonin ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အိပ်ရာဘို့သင့်ပြင်ဆင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်အရာ, သင်၏မျက်စိရောက်ရှိရာမှအပြာရောင်-လှိုင်းအလျားအလင်းကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအကွောငျးကို $ 10 ဤဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၂) အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်သောကုထုံးကိုလေ့ကျင့်ပါ။ သင်အိပ်သည့်အခါအလင်းရင်းမြစ်အားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှဖယ်ရှားပါ။ နိုးသောအခါသင်အားပြင်းထန်သောအလင်းတန်းသို့ပို့ဆောင်ပါ။ အလင်းကုထုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်ုပ်အတည်ပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အစပိုင်းတွင်စျေးကြီးသော်လည်း၊ သင်သည်အလင်းသေတ္တာတစ်လုံး ၀ ယ်လိုသည်။ ငါ $2ခန့်နှင့်အတူအမေဇုံပေါ်တွင်ရောင်းချအပေါ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
၄) ည ၇း၅ နာရီမှ ၉ နာရီအိပ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးအိပ်ပါ။ ၇.၅ သည်စံပြဖြစ်ပုံရသည်၊ ပို၍ ကောင်းသည်မဖြစ်သကဲ့သို့။ REM သံသရာကိုမနှောက်ယှက်နိုင်အောင်မိနစ် ၉၀ ကြာအိပ်ရန်ကြိုးစားပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ၄ ​​ချက်ကိုဂရုစိုက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးအိပ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ - ၁) စာရင်းပြုစုပါ။ အလုပ်မှာငါအစဉ်မပြတ်စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်အမှုအရာကိုချွတ်စစ်ဆေးနေ / ကူးဖြတ်နေပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ငါလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုမေ့သွားမှာကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ၂) ထွက်အောင်လုပ်ပါ။ ဒါကအားကစားရုံကိုသေချာပေါက်မဆိုလိုဘူး လမ်းလျှောက် / ပြေး / pushups / situps, သမျှ။ သင်၏နှလုံးခုန်မှုကိုတစ်နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင်သာမြင့်တက်စေပါ (ညနေခင်းတွင်အလွန်နောက်ကျမည်မဟုတ်) ။ သင်အိပ်ရာဝင်သည့်အခါသင့်ကို ပို၍ ပင်ပန်းစေရုံသာမကစိတ်ဖိစီးမှုနည်းသွားပါလိမ့်မည် ။.4) စောစောထပါ (သို့သော်ဤအလုပ်သည်သင်၏အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်) ။ ညနေခင်း၌အိပ်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါသင်ငြီးငွေ့သွားလိမ့်မည်.1) ငါများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများနှင့်နားများကိုတစ်စုံတစ်ခုသောရှပ်အင်္ကျီကဲ့သို့တင်လေ့ရှိသည်။ အဲဒါကျွန်တော့်ကိုကူညီတယ်။
အပန်းဖြေဘို့အသက်ရှူခြင်း:7နှင့်လွှတ်ပေးရန်ကိုင်ထား4စက္ကန့်ရှူ။ သငျသညျတဖနျအိပျပျြောသှားဖို့အလုံအလောက်စိတ်အေးလက်အေးခံစားရအထိဤလုပ်ပါ။
ကျွန်မစတင်ဖွင့်ချိန် မှစ. ငါသည်ငါ့ Self-စည်းကမ်းတစ်ခုကွာခြားချက်ကိုသတိပွုမိခဲ့ပါတယ်။ တဦးတည်း, ဤရှားပါးဆုံးနဲ့သိသာသည်, ငါသည်နေ့တိုင်း 8AM မှာတသမတ်တည်းနိုးထဖို့ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြရတယ်။ ငါက Android application ကိုမှအကြွေး၏ကြီးမားသောငွေပမာဏအကြွေး နှိုးစက်နာရီ Extreme, သင်နှိုးဆော်သံနှုတ်ပိတ်နိုင်ရန်အတွက်သင်္ချာပြုပါရန်ရှိသည်မထွက်ရတဲ့ function ကိုရှိပါတယ်ရာ။ ကျွန်မကိုလည်းနှိုးဆော်သံတဖြည်းဖြည်း 10 မိနစ်ကျော်အပြည့်အဝအသံအတိုးအကျယ်သို့ရောက်ရှိသည်, မသန်စွမ်းတစ်မှေးအိပ်ရှိသည်။ ပေါင်းစပ်ဤအမှုအရာတို့ကိုငါ့အဘို့အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ငါသာပြန်အိပ်ရာသို့ခုန်ဖို့, ကကို turn off ငါ့အခန်းထဲအနှံ့တစ်ဦးထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ခုန်ထနိုးမှမရှိကြပါဘူး။ ဒါတဖြည်းဖြည်းကြောင့် blended ခံရဖို့ခဏတစ်ယူလာ ထွက် ငါ၏အအိပ်မက်၏, ငါအဲဒါကိုနေဆဲစိုးရိမ်ထိတ်လန်ရန်လုံလောက်သောကျယ်လောင်မယ့်ပယ်မယ့်နားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါ။ ငါထရပါမည်ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့အခန်းထဲ၏အခြားဘက်ခြမ်း၌ထား၏။ အဲဒီနောက်သူကကို turn off လုပ်ဖို့သုံးမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့သင်္ချာခု၏လုပျဆောငျဖို့ရှိသည်, ထိုစင်မြင့်အားဖြင့်သာငါပြန်အိပ်သွားစိတ်ဝင်စားဘူး။ 8AM သင်သည်အများစုကောင်းကင်ကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့ငါမကြာခဏ 11AM ပြီးနောက်နှိုးထ၏အလေ့အထသို့ကျဆင်းသွား, ငါအစဉ်အမြဲတသမတ်တည်းဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မပင်တနင်္ဂနွေကိုကျော်ပါကလုပ်နေတာ, ငါ့နှိုးဆော်သံကိုချွတ်သွားသည်မတိုင်မီတခါတရံနှိုးထတယ်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်ကျော်ငါ 7AM ကတွန်းအားပေးပါလိမ့်မယ်။
မိန်းကလေးတစ်ဦး spooning နေစဉ်ခက်ခဲ-on ကိုညဉ့်လုံးရှိပါသလား? ငါအတှေ့အကွုံခဲ့ပါပြီ။ ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါစိုက်ထူသင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုတက်တန်းစီခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါဟာသူမသှားဖို့လိုသည်။ ဒါဟာသဘာဝလိင်အင်္ဂါသိမ်းယူသော်လည်း, သင်သည်တခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအသူမ၏ဖို့စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကိုဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ကြကုန်အံ့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြပါ။ ကိုယ့်ဦးခေါင်း၌ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုထပ်စောင့်ရှောက်:
အေးဆေးတည်ငြိမ်ပါ၊ တိုင်းစွမ်းအားအပေါ်သူမ၏မှစွမ်းအင်စီးဆင်းကြပါစို့။ ထိုမိန်းမကိုရှိစေတော့။
အမှန်တကယ်စကားလုံးများကိုအရေးကြီးသောမဟုတ်ပါ။ အဘယ်အရာကိုအရေးပါသည်ကိုသင်သူမ၏သို့စီးဆင်းရန်သင့်ပုလ်စွမ်းအင်များအတွက်သတိရည်ရွယ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ထားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထိုအခါသင်သည်အပန်းဖြေကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကြကုန်အံ့။ သငျသညျဤသို့ပြုလျှင်, စွမ်းအင်ကြောင့်ရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သင့်စိုက်ထူသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုရွှေ့မည်။ ထိုအခါသင်သည်အလွန်စိတ်အေးလက်အေးခံစားမိပါလိမ့်မယ်သင်ကကောင်းစွာမအိပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းလည်းသူမကတကယ်🙂ပြီးနောက်သင် likes ကြောင်းဆုံးဖြတ်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။
လအနည်းငယ်အကြာကငါ Deepak Chopra ကအတူရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာတစ်ခုခု (ဒေါက်တာ oz) မြင်သူကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းဘို့တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့ဘယ်လိုတစ်သင်ခန်းစာကိုပေးတော်မူ၏။
သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါအနည်းငယ် Self-အတညျပွုဟုအားဖြင့်သင့်ထွင်ထားတဲတစ်ခုချင်းစီဘက်မှာသင်တို့လက်နှင့်သင်၏ကျောဘက်မှာမုသား, နက်ရှိုင်းစွာအသက်ရှူနှင့်ပထမဦးဆုံးက start ဖြစ်ပါတယ် (ငါအကောင်းတစ်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို, ငါချစ်နေပါတယ်, ငါသည်စသည်တို့ကို, ဘာမှလုပျနိုငျ) နှင့် ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီနှငျ့သငျထိုနေ့ရက်ကျေးဇူးတင်ကြသည်သင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်တိုင်းအရာစာရင်းပြုစုရန်စတင်ပါ။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးကလုပ်နေတာစတင်လာတဲ့အခါ, ငါ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာရင်းရှည်လျားခဲ့သည်။ ဒါဟာငါသောက်ကော်ဖီကနေငါမြင်သည့်ပျားပိတုန်းဖို့အရာအားလုံးပါဝင်သည်!
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ယခုငါချစ်ရသူနှင့်မိသားစု၊ ငါ့မြင်းများနှင့်ခွေးများအတွက်ကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်ရုံသာမကအိပ်ပျော်သွားပြီဖြစ်သည် !!!
မင်းညတိုင်းလုပ်ရတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးလိုက်တာပါ။ ၎င်းသည်အိပ်ပျော်နေသောမည်သည့်ဆေးထက်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်၎င်းသည်အခါတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်
အိပ်စက်ခြင်းကန့်သတ်သည့်အခါဦးနှောက် Scan ဖတ် junk အစားအစာမှတိကျတဲ့အာရုံခံတုန့်ပြန်ပြသ